ဘလော့ကာ မောင်စွယ်စုံကျမ်း နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက် အင်တာဗျူး - www.zwmnna.comFree Online Media Malaysia (ALL IN ONE)
» ဘလော့ကာ မောင်စွယ်စုံကျမ်း နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက် အင်တာဗျူး - www.zwmnna.com
Written By နေဇော် လင်း on Monday, December 19, 2011 | 6:00:00 PM
မေး = အစ်ကို ဆိုက်မှာက ကဗျာရေးတဲ့ ကဗျာ ဆရာတွေ တော်တော်များတယ်နော် ... အစ်ကို ဒီဘလော့ကာ ဆိုတဲ့ ကိုယ်တိုင် ဝဘ်ဆိုဒ်မရေးခင် ဘယ်ဝဘ်ဆိုဒ်မှာ စတင် ရေးဖြစ်တာလဲ ?
မေး = ဘလော့ စတင် ရေးဖြစ်တုန်းက အစ်ကိုအနေနဲ့ရော ဘယ်လိုအ ခက်အခဲတွေကို ဖြတ်သန်းရလဲ ? အမှတ်တရ တစ်ခုခုပေါ့ ...
ထမင်း ဟင်းတော့ ဆိုင်မှာ စားတယ်လို ကြားဖူးပါတယ်။ မြင်လည်းမြင်ဖူးပါတယ်။ မောင်စွယ်စုံကျမ်းရဲ့ ဘော်ဒါတွေပါပဲ။ တစ်လုံးမှ မတတ်တတ် Abc သိရင် ချက်တင်ကစလို့အင်တာနက်မှာ ကျင်လည်နိုင်သည် အထိ မောင်စွယ်စုံက သင်ပေးပါတယ်။ နီးစပ်ရာပေါ့။ စက်ရုံတစ်ရုံထဲတို့ နေရာတူလို့နီးလို လိုက်သင်ပေးတာတို့ပထမတော့ လက်ကွက်ကျင့်ဖို့ ချက်တင် သင်စေပါတယ်။ အကောင့်များ ပေါလွန်လွန်းလို့ naing ဆိုဒ်တွေသွား မြန်မာ နိုင်းဆိုဒ်တွေ7ဆိုဒ် လောက်သွားလိုက် ပြန်ခါ လူတစ်ရာ လောက်ပါလာမယ်။
ရည်းစားရှိ သူနုတ် မာနကြီးသူကိုပယ်။ ပြန်မပြောသူကို ဘလော့လုပ်ပြီး ဆန်ကာတင် လူ 30 လောက်ရွေး လိုက်ပါတယ်။ ပီးရင်း မောင်းပေတော့ တပည့်ရေ။ ဆရာတစ်ပတ်ပြည့်ရင် နောက် တစ်ဆင့်ပြမယ်ဆိုပြီး ထားလိုက်တာ နောက်တစ် ပတ်ပတ် သွားကြည့်ဗျာ။ လက်လန်တယ်။ ခြေထောက် ပါလန်တယ်။ ခြေခွင်ပြီး ခါးပါစောင်းတယ်ဗျို့ချက်တင် လုပ်နေတာနော်။
ပြီးရင်ဖြစ်တတ် တဲ့ပြသာနာ လေးတွေ ပြင်နည်းလေးတွေ သင်ပေးပါတယ်။ ချက်တင် ရဲ့ကောင်းကျိုးကတော့ လက်ကွက်မြန်တာပါပဲ။ လူများလေ မြန်လေပဲ။ ဒီမှာကြည့်လို့ရတယ် စာရိုက်တာ နှေးတဲ့သူက သိပ်မချက်တင်သေးဘူး။ အဲ့လိုမှတ် တောက်လျှောက် တက်လာသူတွေ ကိုတော့လက်ရှောင်ပေါ့။ ဆရာသမားတွေမလို့ အမြန်ရိုက်နိုင်တာ ဆိုးကျိုးကတော့ ရှေ့ဆက်ပြီး သင်ရမှာတွေ မတတ်တော့ တာပါပဲ။
ချက်တင်မှာ ကျူနေပြီး အချိန်ကုန်နေမဲ့အစား နည်းပညာဘလော့တွေ နိုင်းဆိုဒ်တွေ ပတ်ပြီး စာဖတ်မှတ်နေရင် ဗဟုသုတလည်းကြွယ်မယ်။ ပညာလည်းတိုးမယ်။ ဖတ်တာများလေတိုးလေပါပဲ။ တခါတလေ ဆရာကမသိဘူး တပည့်ကစာဖတ်တာများတော့ ကိုယ်သင်ပေးတဲ့သူက ကျော်မောင်းနေတာ ဗျာ။ အဲ့တော့ ဆိုးကျိုးကောင်းကျိုး ကတော့ မိမိအပေါ်မှာသာ မူတည်မှာပါ။ လွတ်လပ်မှုကိုမြတ်နိုးလို့ မဝေဖန်ချင်ပါဘူး။
မေး = အစ်ကိုမောင်ကို စာဖတ်သူ နည်းပညာ လေ့လာနေသူ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေများက မေးနေကြပါတယ်။ လူပျိုကြီး လုပ်မှာ လားတဲ့ ဘယ်လို ပြန်ပြောပေး ရ မ လဲ ?
ဆောရီးပါလို့ မုသာဝါဒကိုတော့ အလကားရတိုင်း မကျူးလွန်ပါရစေနဲ့ စကားလှအောင် မဖြေတတ်ဘူး ရှင်းနေတာပဲ လူပျိုကြီး မဖြစ်နိုင်ဘူး ... ဟဟ ( ရုပ်ချောတယ် အပြောကောင်းတယ် လက်သီးပြင်းတယ် ... တိန် ...) ဟန်ဂျီအင်း ရှိတယ်လေ။ လောလောဆယ်တော့ တိုင်ပတ်နေပါတယ် အဲ့တော့ လူပျိုကြီး လုပ်မှာလားလို့ မမေးပါနဲ့ဗျာ ကြားရတာနဲ့ တင်တိုင်နဲ့ ခေါင်းနဲ့ ဆောင့်လိုက်ချင်ပါတယ်။ လုံဝ မလုပ်နိုင်ပါဘူး အဲ့လောက်ဆို လုံလောက်ပီ ထင်ပါတယ်နော် မလုပ်ပါဘူး ခင်ဗျာ ....
မေး = အခု ဘလော့ရေးသူတွေအားလုံး အတွက် ရည်ရွှယ်ပြီး မေးခွန်းလေး မေးချင်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ အခုဘလော့ရေးသူ တော်တော် များများဟာ သူတို့အတွက် မဟုတ်ပဲ အများအတွက် သူတို့သိတာလေးတွေကို မျှဝေပေး လျှက်ရှိနေကြပါတယ်။ ဆိုတော့ သူတို့ဆိုက်တွေ သွားပြီး လိုက်ဆဲဆိုတာတို့ မကောင်းပြောတာ တို့ ဆိုတာကတော့ ဘလော့ရေးတဲ့သူတိုင်း ကြုံဖူးကြမယ် ထင်ပါတယ်။ အစ်ကိုအနေနဲ့ရော ဒီလိုဖြစ်နေတာနဲ့ ပက်သက်ပြီးတော့ ဘာများပြော လိုပါသလဲ ?
ဒို့မြန်မာတွေ အချင်းချင်း မျှဝေတာ ချင်းအတူတူ ဘာလို့ စိတ်ဝမ်းကွဲ နေမလဲနော်။ စောစောက ပြောသလိုစည်းလေး နဲနဲစောင့် အများကြီးမဟုတ်ပါဘူး အဲ့လိုဆို စောစောကပြောတဲ့ဆဲတာ 3ပုံ တစ်ပုံတော့ ရော့သွားမယ်။ ကျန်တဲ့တစ်ပုံက personal ကျန်တဲ့တစ်ပုံကတော့ အပြစ်မြင်သမားတွေကြောင့် ရှင်းရှင်း ပြောရရင်ဒို့မြန်မာတွေပါပဲ။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ မြန်မာလို ဆဲသွားကြတာ လို့ပါ။ အဲ့တော့ဗျာ ကျနော်ပြောချင်တာကတော့ အနိစ္စ ၊ ဒုက္ခ ၊ အနတ္တ ဆိုတဲ့ သဘောတရားပဲ ဆင်ချင် ဘယ်အရာမှ မမြဲဘူး ဖြစ်ချိန်လို့ဖြစ်တယ်။ ဆဲခံချိန်တန်လို့ ဆဲတယ်ပဲ မှတ်တယ်ဗျ။ ဘာမှ မလုပ်တတ်တော့ ဆဲလည်းခံရမှာဗျို့ နောက် တစ်ခါလာဆဲရင် ပိုက်ဆံသာ ကောက်ချေးလိုက် အဲ့လောက်ဆို မေးခွန်းအတွက် လုံလောက်ပါပြီ ....
မေး = အခုနောက်ဆုံး စာဖတ်သူ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေများ နည်းပညာလေ့လာ နေသူများကို အစ်ကိုပြောချင်တဲ့ စကားတစ်ခုခု ပြောပေးပါဦး ။
အခုလို အင်တာဗျုးလေးနဲ့ ပက်သက်ပြီး သိချင်တာလေးတွေကို အချိန်ပေး ပြောကြားပေး ဖြေကြားပေးသော ဘလော့ကာ အစ်ကို မောင်စွယ်စုံကျမ်းကို ကျေးဇူးအထူး တင်ရှိပါတယ်။ အစ်ကိုရဲ့ဘလော့လေးလည်း နည်းပညာ ဗဟုသုတ လေ့လာနေသူတွေ အတွက် တန်ဖိုးရှိသော ဆိုက်လေးတစ်ခု ဖြစ်ပြီး လူအများအတွက် အကျိုးပြု အသုံးဝင်သော ဆိုက်လေးတစ်ခု ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးပါတယ်။
ပညာအရည်အချင်း = မိတ္ထီလာ စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် ကျောင်းသား
12/19/2011 6:57 PM
ဟုတ် မောင်(စွယ်စုံ) ရဲ့အင်တာဗျူးလေး ဖတ်သွားပါတယ်ရှင်ခုလို ဗျူးပေးတတ် ကိုနေဇော်လင်း(တိန်)ကိုလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်
12/19/2011 7:27 PM
12/19/2011 7:42 PM
ဖတ်သွားပါတယ်။ အင်တာဗျုးလေးကောင်းပါတယ်။ဝင်ပြီးသွားကြည့်လိုက်ဦးမယ်။ကျေးဇူး .............
12/19/2011 8:39 PM
BLOGGER..(မောင်စွယ်စုံကျမ်း)ဗျူးတာလေးဖတ်သွားပါတယ်ဗျာ...မေးတဲ့သူလဲတော်တယ် ဖြေတဲ့သူလဲတော်ပါတယ်...ဆက်ပြီးတော့ အားပေးနေပါတယ် ...
12/19/2011 8:41 PM
ကောင်းတယ်ဗျာ ဗျုးသွားတာလေးက အားလည်းကျပါတယ် အားလည်းတက်ပါတယ် :P ခုနကပေးသွားတဲ့ဆုကိုလည်းရချင်ပါတယ်
ကိုနေရေ အင်တာဗျူးလာဖတ်တယ်နော် ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာအကြောင်းတွေကြောင့်စိတ်ညစ်နေလို့အားပေးသူအားလုံးကိုလည်း ကျေးဇူးပါလို့မေးအက်လာပြီးပြန်မပြောဖြစ်တာတွေကိုလည်း စိတ်ညစ်နေလို့ ပါလို့အားလုံးကို ဒီနေရာလေးကနေ အသိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်နော်
12/19/2011 11:45 PM
ဒီမယ် ဆရာမောင် ...စီးပွားရေးကျောင်းကို နည်းနည်းတော့ အားနာဖို့ကောင်းပါတယ်..ဒါပဲ..:P:P:Pအမေးရောအဖြေပါ ဘက်စုံထောင့်စုံကနေမေးထားပေးလို့ အများကြိးပညာသားပါလှပါတယ်....ဒီအင်တာဗျူးလေးအတွက်ကျေးဇူးပါလို့.....(နှစ်ယောက်စလုံးပါနော်..)
12/20/2011 2:24 AM
အစ်ကိုတို့နှစ်ယောက်လုံးကို ကျေးဇူးအထူးပင် တင်၇ှိပါတယ်ခင်ဗျာ.. အားလည်းကျမိပါတယ်.. အစ်ကိုတို့တစ်တွေ ဒီထက်မက အောင်မြင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ...
12/21/2011 1:26 AM
ဆရာတို့နှစ်လောက်လုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဗျာ ဆရာတို့ကို အားကျလိုက်တာဗျာဆရာတို့ဆက်လက်အောင်မြင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ.............
12/21/2011 1:32 AM
ဆရာတို့အားလုံး ကျန်းမာကြပါစေဗျာ ဒီထက်မက အောင်မြင်ပြိး မြန်မာပြည်ကလူငယ်တွေအတွက် နည်းပေးလမ်းပြများအဖြစ် ဆက်လက်တည်တံ့ နိုင်ကြပါစေဗျာ.....
12/21/2011 1:36 AM
ဗျူးတာဖတ်သွားပါတယ် ညီငယ်တားတားရေဒါပေမယ့်မေးတာလေးတစ်ခုကျန်ခဲ့တယ် ဆော်ကြည်တဲ့ဆော့ဖ်ဝဲ ကို ကိုအမောင်တစ်ယောက်ထဲ တိတ်တိတ်လေးကြိတ်ပြီးသုံးနေသလားဆိုတာလေး မေးပေးပါဦး ဒီလူ သိပ်လျှိုတာဗျို့:)
1/05/2012 6:04 PM
1/24/2012 8:38 PM
Min Tha Khin
ဟုတ်ကဲ့ ဗျူးတာဖတ်သွားပါတယ် ဆရာတွေနှစ်ယောက် လုံးကို အားကျပါတယ် လေးစားပါတယ် ဒီထက်မကအောင်မြင်ပါစေ
1/06/2015 2:42 AM
ဟုတ်ကဲ့ ဗျူးတာဖတ်ရပါတယ် ဆရာတွေနှစ်ယောက်လုံးအားကျပါတယ် ဒီထက်မကအောင်မြင်ပါစေ
1/06/2015 2:45 AM
တန်ဘိုး အထိုက်တန်ဆုံး သောအရာ (ရသ စာပေ)
တစ်ရက်မှာ လူကုံထံအဖေက သူ့သားငယ်ဖြစ်သူကိုခေါ်လို့ ရွာလေးတစ်ရွာဆီသို့ ခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ အဖေဖြစ်သူက သားငယ်ကို ပိုက်ဆံကြွယ်ဝမှုမရှိတဲ့သူတွေဟ...
DOWNLOAD မာန်မတက်နဲ့လန်ထွက်သွားမယ် | ကျော်ရဲအောင် စိုးမြတ်သူဇာ Movie title : မာန်မတက်နဲ့လန်ထွက်သွားမယ် Starring : ကျော်ရဲအောင် စိုးမြတ်သူဇာ | Kyaw Ye Aung Soe Myat Thu Zar ပထမပိုင်း ၊ ဒုတိယပိုင်း ကြည်...
သစ္စာလူထွန်း | လူမင်း အိန္ဒြာကျော်ဇင် မိုက်ခေတ်ကုန်ပြီ ( နေထူးနိုင် နဒီဝင့်နိုင် )